Nangona i-pottery ayikho enye yeminyaka yeminyaka, kwakukho ixesha apho le nto yayinzima kakhulu ukuyifumana kwii-shelves zevenkile. Kwiminyaka emininzi edlulileyo, abantu baqala ukuphawula ukuba nangokupheka, ukutya okuphekwe kwiitya ze-ceramic kugcina ingcamango yendalo. Nangona i-cookware yenzelwe ukusetyenziswa kwii-ovens zamatye, iyaqhubeka ihamba kunye neendlela ezintsha zexesha lethu kwaye iguqule kakuhle kwiindlela ezifana ne-oven microwave kunye ne-oven. Kule nqaku, asiyi kuthi nje indlela yokunyamekela ngayo ubumbi, kodwa kunye neziphi izitya ezilungiselelwe kwiivenkile ezinjalo.
Ziziphi iiparitha ezikhethiweyo zobumba ezikhethiweyo kwisicelo sabo kwezobugcisa bokutya, kwaye ukuba zingatyalwanga kuwo? Ukuba ukungahambi kakuhle kwimixholo, kuyafaneleka ukukhumbula ukuba isityalo esinjalo esingaphambanga njengephalaenopsis sikhetha ukukhula kwisiqwenga esenziwe ngodongwe. Kukho ezimbini iintlobo zobumba zodongwe ezilungiselelwe ukupheka. Kwaye konke oku kwakhokelela ekuveleni kweengcamango ezithile, eziphathelene nokusingqongileyo kunye neenzuzo zobumbanyo.
Izinzuzo kunye nobumba
Kwangexesha elide kukho uluvo lokuba iingubo ezicwebezelayo ngaphakathi ebhodweni inobungozi kwimpilo. Le ngqungquthela yayisekelwe kwinto yokuba kukho izinto ezinobungozi ekubunjweni kwe-glaze. Kodwa le ngcaciso sele isele ifikelele kwixesha elingaphezu kwesigama sekhulu. Kwihlabathi lanamhlanje, abavelisi be-glaze basebenzisa i-boleenovymi, ubuchwephesha bokwenza ubugcisa. Ngokomzekelo, abavelisi baseRashiya banokusebenzisa i-glaze efanayo, ngaphakathi nangaphandle xa bevelisa izitsha zetsimbi ezifakela.
Nangona ukuhlambuluka ngokucophelela kwezitya ezingenakunyulwa emva kokulungiswa kokutya kuyo, izidlo zokutya ziya kuhlala zihlala kwiingxowa ezingekho phantsi, eziza kuhlahloka kwaye zikhuphe ezi zinto zityhefu. Ungacingi ukuba ukugubungela umbumbi nge-glaze kukuphawu lobutyebi kunye nokunethezeka. Yimfuneko nje yokunyamekela impilo yabathengi. I-Glaze ihambelana nalo mzekelo kusetyenzisweni lwesigcawu esincinci seglasi, kwaye njengoko kwaziwa, iirazi yinto enokuthenjwa.
Iimpawu zelaphu ephekiweyo kwizimbiza zobumba
Akuyimfuneko ukuba ube ngumqhubi omkhulu ukuba akwazi ukulungiselela izitya ezithandekayo kwiidongwe. Iimpawu eziphambili zezinto ezenziwe ngeenkuni zizinto ezilungileyo kakhulu ezingagcini nje ukugcina ubushushu, kodwa nazo zinokusebenza kakuhle. Ukutya okuphekwe kwimbumbi kuyimvelaphi kwaye kungenakuqhathaniswa, ngokungafani nento enokutyiwa okanye eyongenisiweyo. Nangona ixabiso leemveliso libonakala lidlulayo kwi-yeramic ware, zonke iivithamini ezixhamlayo kunye nezinto ezisebenzayo zihlala kuzo.
Kuba abalandeli bokupheka ukutya kokutya kwinqwelo ye-ceramicba into eyintandokazi. Ngokomzekelo, abo bahambelana nokutya kwekwindla, okungavumeli ukusetyenziswa kwamafutha ekudleni, ukupheka kwesi sixhobo kuya kulungeleka, kuba akunakwenzeka ukuba ungeze amafutha kwiitya zeramisi, ngelixa uhlala unonwabo. Kuyafana nokutya.
Iingxabano ezihlala zikhona phakathi kwabapheki, kunye nezigunta zidibanisa naye, malunga nomlinganiselo wamanzi okufuneka usetyenziswe xa upheka ukutya kwiibhotile. Ekufezekeni, amanzi akudingeki ukuba yongezwe nakwezinye, kuba ekulungiseleleni imifuno kunye nenyama, ijusi apho ikulungele khona kufuneka iveliswe. Inqaku, osoyikayo ngesitya esilungisiwe, unokongeza amanzi amancinci, kodwa kulungele ukukhumbula ukuba amanzi akufanele adlule ngaphezu kwesithathu komthamo wezinye iimveliso.
Enye inzuzo yokupheka ukutya kwiibhotile - akufuneki ukudibanisa ngexesha lokupheka - le nto ayiyi kuvumela ukuba iimveliso zokupheka zitshise.
Imithetho yokusebenzisa izimbiza zobumba
Izinto ezinjalo zobumba ezifana neekeramics kunokuba zisetyenziswe. Ukuze izitya ezivela kule ndawo zihlale ixesha elide, kufuneka ukwazi ukuzinyamekela.
Ukuba usebenzisa izitya ezingezange-glazed, iphosa ngokukhawuleza. Ukukhusela oku, kucetyiswa ukuba ezinye izitya zibe nezimbiza ezihlukeneyo. Masithi, ukuba kulo mzekelo usebenzisa iipate ezifanayo zokupheka intlanzi kunye nenkukhu, ngoko ekugqibeleni ukutya kukufumana iphunga elingafunekiyo nelingathandekiyo. Yingakho udinga yonke into ngokuhlukileyo.
Iifotyi ezithengwa ngokutsha kufuneka ziqale zifakwe kwisihlamba esikhulu kwaye zizaliswe ngokupheleleyo ngamanzi abandayo. Emva kokuba kudlule iyure, ziyakususwa kwaye zome. Ngaphambi kokulungiselela nganye, ukutya kuzaliswe ngokupheleleyo ngamanzi abandayo kwaye kushiye imizuzu eyi-15.
Ekupheleni kokupheka, musa ukucebisa ukuba usebenzise ukusetyenziswa kwee-agent ezithintekayo, nangona izitya zikhulu kakhulu. Ungathatha indawo yale mali ngewayini eliqhelekileyo leviniga, usebenzisa iipilati eziyi-2-3 kwigumbi ngalinye kwaye emva kokuzigcwalisa ngokupheleleyo ngamanzi. Emva kokuba izimbiza zifakwe kwihovini elibandayo kwaye zifudumeze zifike kwiqondo lokushisa lama-150-170 degrees kwaye zibambe apho imizuzu engama-30. Emva kokupholisa okucothayo kweembiza, bahlamba kunye nokusebenzisa isepha yendlu kunye nokusela isoda.
Iimpawu zobuninzi bokuba yinto ephosakeleyo kwaye ayifuni ukuhla kweqondo elibukhali. Yingakho i-clay yarn igcinwe kuphela kwihovini ebandayo kwaye ifudumala kwiqondo lokushisa elincinci. Kodwa xa kufika ixesha lokususa izimbiza, cebisa ukuba usebenzise ukusetyenziswa kweemithi zokhuni, kodwa akukho nto ibeka phezu kwendawo ebandayo.
Ukufudumala kweefestile kunye neendonga ngaphambi kwebusika
Indlela yokucoca ifenitshala yokuhlamba ekhaya
Yintoni ongayibonisa ngayo umnyaka omtsha kumnye osebenza naye
Indlela yokutshata ngokufanelekileyo, ngubani oya kuthixelela?
UKonstantin Meladze akayi kuthetha ngokuphila noVera Brezhneva
Ngaba ukubonakala kwindoda ebalulekileyo kwintombazana?
Ngaba isiteliti sinxiba ibhanti ngo-2018: imizekelo emihle kakhulu evela kwi-fashionistas!
Iidyoke ezenziwe ngamakha